दशैंमा कस्तो मासु खाने र कस्तो नखाने ? - Himalayan Kangaroo
दशैंमा कस्तो मासु खाने र कस्तो नखाने ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २ कार्तिक २०७२, सोमबार ०२:०० |
उत्सव र चाडपर्व भन्ने वित्तिकै अधिकांश नेपाली समाजले थरि थरिका मीठा मीठा परिकार बनाएर खाने अवसरका रुपमा बुझ्ने गर्दछन् । त्यस्ता परिकारहरुमा पनि मासु र मासुजन्य परिकारको बाहुल्यता रहने गरेको छ । तर चाडपर्वको खुसी साट्नका लागि खाने र खुवाउँने मासुका परिकारहरु सहि तरिकाले खाइएन भने मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ । दशैँमा अझ बढी मासुका बिभिन्न परिकारहरु खाने चलन छ । त्यसैले दशैंमा मासु र मासुजन्य परिकार खाँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
मासु पकाउँदा धेरै बेरसम्म ठिकको आगोमा पकाउनु पर्छ । मासुका विभिन्न परिकार बनाउने क्रममा धेरैले पोलेको र भुटेको मासु रुचाउने गरिन्छ । तर उच्च तापक्रममा मासु तारेको पोलेको र भुटेको खानाले क्यान्सरको जोखिम रहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । उच्च तापक्रममा मासु फ्राई गर्दा हेटेरोसाइकिल्क र पोलिसाइकिल्क जस्ता केमिकल निस्किने र उक्त केमिकलले क्यान्सरको जोखिम बढ्ने भएकाले दशैको मासु पकाउँदा सजक रहन चिकित्सकहरुले सुझाब दिएका छन् ।
मासु धेरै सेवन गर्नाले मोटोपन बढ्ने र त्यसले शरीरमा एस्ट्रोजेन हर्मन बढ्ने गर्दछ । सो हर्मोनले क्यान्सरको खतरा बढ्ने अनुसन्धानहरुले प्रमाणित भएको छ । नुन हालेर मासु फ्रिजमा राख्ने र अचार छोइला जस्ता परिकार खानाले भयानक रोगको शिकार बन्ने खतरा बढी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । दशैमा दिनहु मासुको परिकार खानु पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने विज्ञहरु बताउँछन् । तथ्यांक अनुसार दिनको १२० ग्राम भन्दा धेरै मासुको सेवनले २४५ क्यान्सर हुने खतरा बढि रहन्छ । मासुकोसंगै साग,फलफुल र रेसादार खानेकुरा खाएमा अन्य रोग लगायत क्यान्सारको जोखिम पनि कम हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.उज्जवल चालिसे बताउछन् ।
मासु पोल्दा र सुख्खा हुने गरी भुट्दा प्रयोग हुने दाउरा र ग्यासबाट हाइड्रोकार्बन उत्पन्न हुन्छ । जसले पेट ,ठुलो आन्द्रा पोस्टेज, कलेजो फोक्सो छाला जस्ता अंग हरुको क्यान्सर हुने जोखिम बढी रहन्छ । त्यस्तै मासु फ्राई गर्दा निस्कने तत्व एचसीए र पीएएचयसले मानव शरीरमा विभिन्न ट्युमरहरु पैदा हुन्छ । यसैको कारण पछिल्लो समयमा क्यान्सरको बिरामी नेपालमा बढी रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यस्तै मासु पोल्दा छोपेर पोलेमा अझ बढी हानिकारक हुने गर्छ । दसैँका बेलामा मासु प्रयोग गर्दा राँगा, खसी र बोकाको भन्दा कुखुरा र माछाको मासु प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाएका छन् । उनीहरुको भनाइमा ती मासु उमालेर खाएमा अरु बढी स्वास्थ्यवर्धक हुने गर्छ । त्यसैले बर्ष दिनमा आउने चाड पर्व र उत्सबलाई रमाइलोसँग मात्र होइन स्वस्थ्य तरिकाले पनि मनाऔं ।
Previousदशैं सकिनै लाग्यो,सुपथ बजार शुरु भएन
Nextओन्सरीलाई सभामुख : जनयुद्ध भन्दा कठिन युद्ध
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०९:४७